Otomatiki Glue Labeling Machine - Micvd.com
Yedu glue yekudzvinyirira muchina ndeyekuzvitakura zvichienderana nezvinodiwa nemutengi. Kazhinji kacho muchina uyu ndewekutenderera wakasiyana siyana. Bhodhoro rinofanira kunyorwa rinoiswa munzvimbo yaro yakatarwa uye rakatenderedzwa kuitira kuti iro rese rakaputirwa-rakapetana neti rinogona kuiswa.
Midziyo yakatenderera yakamisikidzwa nenzira yehonye yekumonera-kutenderedza mashandiro panzvimbo yekunyorera, iyo cylinder yeglue inotenderera inowana inotonhorera glue kubva kugluepot iyo inozotamisirwa paGlue Rubber Roller. Pakupedzisira yakanaka, yakatetepa uye yakatetepa firimu yeglue inoendeswa kune yekunamatira pad. Iyo denderedzwa mudziyo pane inofamba inosimudza pane iyo yekudyara honye inoteedzera akateedzana, izvo zvinoguma nekukanganiswa kweyeye label bhokisi. Iyo inotenderera chitaridzi tenzi yakanangana nerubatsiro rwekunhonga minwe f rom iyo label tenzi & ine oscillating Label Bhokisi. Iyo yekunhonga humburumbira inogamuchira zvinyorwa nerubatsiro rwekunhonga minwe kubva kune chitaera tenzi. Iyo yekunhonga humburumbira inobata mavara acho zvakakwana neayo nekuda kwekutsvaira panguva yekufamba kwayo kwekutenderera. Panguva imwechete zvigunwe zvekunhonga zvinofamba zvichipinda mukati, Iyo denderedzwa mudziyo inofamba ichitakura nerubatsiro rwehonye uye yakanamirwa chitaridzi pane yekunhonga-cylinder yakaputirwa yakatenderedzwa kusvika kumudziyo nekuda kwemabhandi emabhande.Ipapo mudziyo wakanyorwa unofamba uchipfuura nepabhandi rekutsikirira rerabha & yakamira yerabha pad iyo inovimbisa yakashambidzika & yakakwana kugadzirirwa kweraibhurari.
Otomatiki Melt Glue Kufungidza Machine
Otomatiki inonyungudika glue yekunyorera nyowani inogadzirwa na NPACK yehombodo inotenderera neine glue inopisa, Hot Melt Glue OPP Chitaura Chokuita Chinyorwa Chemanyowa. Iyo glue inopisa inogona kuseka maviri emucheto welebula.
Iyo yega otomatiki uye inodzora mashandisiro ekushandiswa kwePLC control, iyo servo system, iyo inverter system, tembiricha yekudzora tembiricha uye zvimwe zvinodiwa nekudzora kwakakwana kwepfungwa.
Otomatiki inonyungudika glue yekudhinda machina yakagadzirirwa neyebhodhoro rekunwa neExpress chitaurwa neyeye nyungudika glue / inopisa, otomatiki denderedzwa bhodhoro rinopisa gukuta glue yekunyungudutsa glue inyaya yemhando. kumhanya kunogona raech 30000pcs / awa inopisa nyungudika glue kunyorera machina mabhodhoro emvura yakachena.
1 Nyore oparesheni kugadzirisa chitaridzi kucheka banga
2 Vacuum dhiramu rakagadzirwa neyakaomarara zvinhu kudzikisira kupokana uye kumira
3 Rapid changeovers: modular dhizaini uye nekukurumidza kuburitsa shanduko zvikamu zvine changeovers nekukurumidza uye nyore mumaminitsi gumi
4 Kushandisa mubato kugadzirisa chinzvimbo chekucheka banga kunogona uye chaizvo
5 Vacuum yakawanda pazasi pechikamu chedhiramu uye cheka, chakagadzirwa nekupisa & kupfeka zvinhu zvisingaite
6 otomatiki chitaera urefu controller kugadzirisa chinzvimbo cheI-MARK
mhando NP-HGL otomatiki inonyungudika glue kunyorera manzwi
Inokodzera vhoriyamu yebhodhoro 500ml-750ml
Bhodhi chimiro Round bhodhoro
Bottle diangle: 55mm-70mm
Label chaiyo: 2mm
Chinyorwa chinoshanda PAPER, PP, BOPP, PVC, Pe, nezvimwewo
Inoshandiswa zvinhu zvebhodhoro Pe, PET, Girazi bhodhoro, POP Inogona
simba 308 VOLTS, 3PFU, 50-60 HZ, 9 -12 KW
Air use 4Mpa
uremu 1500 Kg
Kupimirwa kwemushini L5000 × W1800 × H2000 mm
1 Kukurira kumhanya yekuchengetedza zvishandiso zvakasungirirwa pane kutyaira nzvimbo
2 Kumisa kwekusaita mashandiro eiyo-yekupa nyeredzi vhiri
3 zadzisa kune bhodhoro rakapihwa (sensor cheki)
4 hapana bhodhoro risina kunyora
Cold Glue Kubatanidza Machine
Cold Glue Kubatanidza Machine Inogadzirwa na NPACK, yakakosha kune iyo pepa renhabvu yedenderedzwa bhodhoro, makani, mbiya neye wet / inotonhora glue, glue ndiro resin glue
Otomatiki Wet Glue bhodhoro Inogona Kufukidza Machine, otomatiki denderedzwa mbiya kunyorova glue kudhinda machina.
Cold Glue Labeling Machine yakarongedzerwa neiyo pepa rechinyorwa maCans, maJars, Bhodhoro uye chero mhando dzemidziyo yekutenderera. Iwo mutengi anotakura mapepa anowaridza mubhokisi rebhokisi, uye glue rakanyorova ndiro resin glue. Iyo mianly kune iyo Chikafu, Chemical indasitiri. Yakazara otomatiki Wet Glue Bhokoro Labelling Machine / Laber.
1 Iine seperate bhodhoro screw auger
2 Ukuru hwebhokisi rebhokisi rinogona kuchinjwa zvinoenderana nesaizi yakajairika.
3 Inoshandisa iyo pombi yeglue uye iyo glue inogona kushandiswa circularl
4 Enzanisa nezvako pachako namira zvinyorwa, Pepa chitaridzi kuita yakaderera mutengo
mhando NP-GLB Cold Glue Inobatanidza Machine
DRIVE Shift mota inotyairwa
Bhodhoro Dhayamita -55-110mm
Kunyora kumhanya 50-120pcs / min
LABELSIZE Upamhi: 20-220mm Kureba: 80-370mm
KUSVIRA ± 1mm
SIZE YEMACHINE 2400 * 824 * 1100mm
SIMBA AC 220V / 380V 50 / 60HZ 750W
1 Kuwanda kweyeglue inoyerera zvakare kunogona kuchinjwa kuti kuguze dzakasiyana kunyorera mazita.
2 Shit mota driver
3 Pepa zvinyorwa uye resin glue zvakachipa pane kutonamira pepa
4 Chero chero mhando dzemidziyo yekutenderera ine pepa rechinyorwa nechitonhora glue